Resin’ny andrarezina Angoley Inter Club 84 – 46, omaly zoma 23 novambra teo amin’ny lalao ampahefa-dalana natrehany ity ekipa tompondakan’i Madagasikara ity. Nisy ny resadresaka fohy nifanaovan’ny tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny FMBBO, Randriamandimby Harinirina Jimmy Désiré, tamin’ny mpanazatra an’ity ekipa Malagasy ity, Rakotonanahary Ndranto “Tagg” taorian’ny lalao tany amin’ny kianja mitafo Pavilhao do Maxaquene any Maputo Mozambika izay nanambarany fa “Raha ny haavo teknikantsika aty Maputo dia efa nanambara ireo manampahaizan’ny FIBA fa tsara ny filalaon’ny ekipa Malagasy ary nampitolaga an’ireo teknisianina avy any amin’ny firenena hafa mihitsy ny fomba fiarovan-tena sy ny fahafehezan’izy ireo milalao an’iny baolina iny. Manana mpilalao lava ranjanana sy efa manana traikefa amin’ny fiatrehana an’itony fifaninanana itony daholo ireo ekipa nihaona tamin’ny Mb2All raha atao bango tokana na ny First Bank Nigeria na ny Cnss Rdc na ny Kpa Kenya, indrindra ny Inter Club Angola. Mpilalao vehivavy manana ny hoaviny mamiratra no ao amin’ny Mb2All vehivavy izay manodidina ny 22 taona eo ny salanisan’izy ireo (misy 4 latsaky ny 20 taona ary 6 latsaky ny 23 taona). Amiko manokana, hoy i Ndranto “Tagg” dia miabo ny fivoahana voalohany taty Afrika ho an’ny MB2ALL sy ho an’ny Basikety Malagasy mihitsy nefa dia efa tafiditra ao amin’ny top 8 vehivavy sahady isika izao. Fanombohan-javatra iny fa hotohizana amin’ny fandraisana anjara matetika amin’ny fifaninanana afrikanina ny ezaka mba hahatonga antsika hanana toerana tsara aty Afrika.
Mazava loatra fa ny tanjona taty Maputo manokana ho an’ny Mb2All dia ny fakana traikefa sy mba hahazoana miatrika ny CCAC indray amin’ny herintaona ka azo lazaina fa fahombiazana ny dia taty Mozambika”.